न्याय नपाएकी राष्ट्रपति र भिडको मनोविज्ञान
निको भएका १३५७३६
अपडेटः शनिबार, चैत १४, २०७६ । २०:१४ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu
नेपाल लाइभ सोमबार, भदौ ९, २०७६, १५:००
म के लेखौं!
रवि लामिछानेको साथमा छु लेखौं वा शालिकराम पुडासैनीको। मारिएका रहेछन् शालिकराम भने उनले न्याय पाउनुपर्छ। अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोष रहेछन् रवि भने उनलाई कतिसम्म्म दुःख दिन मिल्छ? क–कसले दु:ख दिन मिल्छ? र, कति दिनसम्म दुःख दिन मिल्छ?
म यस्तो देशको नागरिक हुँ, जहाँ न्याय नपाएकी राष्ट्रपतिको शासन छ। उनै राष्ट्रपतिलाई पनि पोल्दो हो भतभती, दुःख लाग्दो हो। तर, दासढुंगामा उनका श्रीमान्‌लाई कसले खसायो, अनुसन्धानमा उनको पनि केही सिप लागेन। नेपालमा कम्युनिज्मको व्याख्या गर्न सक्ने र बिजारोपपण गर्ने साहसी नेता मदन भण्डारी मारिए। समयले उनकै परिवारको सदस्यलाई देशकै सबैभन्दा उच्च पद र जिम्मेवारी दियो। यति हुँदा पनि उनले न्याय पाएनन्। उनलाई प्रिय नेता मान्ने र उनकै फोटोमा माला लगाएर काम सुरु गर्ने दलको हातमा न्यायालयको बागडोर छ। यति हुँदासम्म पनि मदनले न्याय पाएनन्।
यो अवस्थामा म के लेखौं- मदन भण्डारीको साथमा छु लेखौं या रवि लामिछानेको?
भ्रष्टाचारको दलदलमा देश फसेकै हो। यहाँ प्रत्येक दिन गन्न नसकिने भ्रष्टाचार हुन्छन्। देख्न नभ्याउने भ्रष्टाचार हुन्छन्। लेखेर वा बोलेर पार नलाग्ने भ्रष्टाचार हुन्छन्। कति त यतिसम्म भ्रष्टाचारी रहेछन्, जसविरुद्ध लेख्न पनि मिल्दैन र बोल्न पनि। आँट गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर रवि र शालिकराम हुन्।
जनताले प्रधानमन्त्रीको काखमा विश्वासले टाउको राखेर निदाउन सकेनन्। दूधे बालकले रिसाएको बेला आमाको काख छाडेर बाबुको काखमा सरेजसरी जनता रविको काखमा सरे। रवि जनप्रिय देखिए, सरकार सुन्नै नसकिने गरी आलोचित भयो।
म शालिकरामले गरेका रिपोर्टहरुको फ्यान हुँ। र, रविले गरेका राम्रा कामको दिवाना। मलाई कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा रविको शैली उति मन पर्दैन। तर, रविले उठाएका विषय र काम गर्ने तौरतरिकाले भने लोभ्याइहन्छ। मानिसले गर्ने भरोसा र विश्वास रविका हतियार हुन्। जो, भ्रष्टाचार गरेर वा बदमासी गरेर पाइन्न। रविले कमाए, शालिकराम गुमाए।
यो अवस्थामा म के लेखौं- सरकारको पक्षमा छु लेखौं वा लेखिदिऊँ- अनुसन्धानमा कोही बाधक नबनौं।
मैले लेखिहाले भने पनि पढ्दा न तपाईंको चित्त बुझ्छ न लेख्दा मेरो नै। मैले यसो लेख्दै गर्दा मलाई राम्ररी थाहा छ, अनुसन्धानमा कसैले औंलो उठाउने अधिकार राख्दैन। तर, न्यायालयसँग विश्वास मरेपछि स्वाभाविक प्रश्नहरु उठ्छन्। मैले त योसम्म बुझ्न सकिनँ, सरकार अनुसन्धानचाहिँ केको गर्दैछ। शालिकरामको हत्या वा आत्महत्या खुट्याउन? आत्महत्याका कारक रवि हुन् भन्ने विषय पहिल्याउन? वा अरु नै केही। यो जरुरी छैन अनुसन्धानका प्रत्येक विषय जनस्तरमा आइपुगून्। तर, यो जरुरी छ अनुसन्धान कानुनसम्मत हुनुपर्छ।
म यस्तो देशको नागरिक हुँ, जहाँ सरकारको सधैं विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सिकेर हुर्किएँ। त्यो सरकार जो सुकैको होस्। जसले देश हाँक्ने बागडोर समाते पनि विरोध गर्ने परिपाटीमा हुर्किएँ। मलाई सरकार अप्रिय लाग्छ, सरकारको विपक्षी प्रिय। यतिबेला यस्तै लाग्ने भिड सडकमा पनि छ। मलाई यसो लाग्नुमा संयोग मात्र पनि हुन सक्छ। तर, यो अवधिमा सरकारले म र म जस्तालाई विश्वास दिलाउन सकेन।
न्यायमा परेका उजुरी किन प्रहरी कार्यालयमा किन दर्ता हुँदैनन् र रविको कार्यालय पुग्छ? कसैले ठगेको कुरा किन उजुरी नगरी रविलाई सुनाइन्छ? काम उठाउने सरकारभन्दा प्रश्न उठाउने रवि कसरी समाजका प्रिय भए?
हुनलाई चाहिँ सरकार अधुरो भयो। सुनकाण्डमा अधुरो, निर्मला हत्याकाण्डमा पनि अधुरो। अन्य थुप्रै घटनामा अधुरो। न्याय पाउने आशा आशामै सीमित भयो। सरकारका सायदै काम होलान्, जसलाई हेरेर आशा गर्न सकियोस् कि यसपटक चाहिँ न्याय हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा म के लेखौं- सरकारको पक्षमा छु, न्यायालयको पक्षमा छु वा रविको!
सरकार भन्छ- न्यायालय छ, प्रहरी छ र प्रशासन पनि। दुरदराजकी बेचिएकी चेली यी सबै छाडेर किन रविलाई फोन गर्छिन्? मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर रविसँग किन गुहार माग्छिन्? विदेशमा दुःख पाएका नेपाली किन सरकारी निकायभन्दा रविकहाँ धाउन सुरक्षित मान्छन्? अन्यायमा परेका उजुरी किन प्रहरी कार्यालयमा किन दर्ता हुँदैनन् र रविको कार्यालय पुग्छ? सञ्चारकर्म गर्दै गरेका रविलाई किन समाजले विश्वास गर्छ र प्रहरी वा प्रशासन ठान्छ? कसैले ठगेको कुरा किन उजुरी नगरी रविलाई सुनाइन्छ? रवि हुनुमा एक हिसाबले किन समाज ढुक्क मान्छ? काम उठाउने सरकारभन्दा प्रश्न उठाउने रवि कसरी समाजका प्रिय भए?
समाजमा हुने गरेका सानाठूला अपराध प्रहरीसँग कम र रविसँग बढी ठोकिन्छन्। कतिपय प्रतिनिधि घटना रविले समाधान पनि गरेका छन्। जबरजस्ती गर्न खोज्ने शिक्षक रविको फन्दामा परे। ती छात्राले प्रहरीलाई उजुरी गरेर शिक्षक ठेगान लगाउन पनि सक्थिन्। कानुनी बाटो पनि त्यही हो। तर, ती बालिकालाई प्रहरीको विश्वास लागेन। आफ्नो बहादुर दाजुलाई सुनाएजसरी रविलाई कार्यालय नै पुगेर मनको आगो निभाइन्, पीडा पोखिन्। रविले अपराध हुन दिएनन्।
म के लेखौं- भाइरल बनाइएको रविको पक्षमा छु लेखौं वा उही रविको पक्षमा छु लेखौं; जो भाइरल हुनुपूर्व जे थिए। कि यस्तो लेखौं- म न्यायालय वा प्रहरीको पक्षमा छु, जो अन्धकारमा न्यायको सपना देखाउँदैछ।
हुन सक्छ यी र यस्ता घटनाले रवि विश्वासका पात्र भए। म रविको पक्ष वा विपक्षमा छैन। अपराध कसैले गर्न हुँदैन भन्ने पक्ष मेरो हो। त्यो अपराध कहीँ न कहीँ रविले गरेका रहेछन् भने उनी कुनै हालतमा छुट्नु हुँदैन। कानुनबमोजिम कारबाही भोग्नैपर्छ। निर्दोष रहेछन् भने धेरै दुःख दिनु हुँदैन।
रवि त्यस्तो विशेष मान्छे होइनन्, जोसँग देवत्व छ। उनी आम मान्छे हुन्। होला, दुःखी मनहरुमा मल्हम लगाउने उनको आदत छ। पीडा देख्न नसक्ने आँखा छ। होला, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् भनेर कामना गर्छन्। तर, दक्षिण भारतीय सिनेमाको नायक रवि हुँदै होइनन्। जो भिडले भन्दा बढी सरकारले बनाउँदैछ, न्यायालयले बनाउँदैछ, प्रहरी र प्रशासनले बनाउँदैछ।
यो बेला म के लेखौं- भाइरल बनाइएको रविको पक्षमा छु लेखौं वा उही रविको पक्षमा छु लेखौं; जो भाइरल हुनुपूर्व जे थिए। कि यस्तो लेखौं- म न्यायालय वा प्रहरीको पक्षमा छु, जो अन्धकारमा न्यायको सपना देखाउँदैछ।
म यस्तो बहादुर प्रधानमन्त्रीको देशको नागरिक हुँ, जुन देशमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा प्रधानमन्त्री झुकेनन्। डटेर सामना गरे, शिर उँचो राखे। त्यतीबेला सम्पूर्ण नेपाली गर्वले प्रधानमन्त्रीको नाम लिन्थे। आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालको पहिलो इनिङ, सानदार बिताए। गौरव गर्न लायक बिताए। र, नेपालीको छाती चौडा बनाइदिए।
यतिबेला उनै प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोस्रो इनिङ बिताइरहेका छन्। सरकारमा सानदार इन्ट्री मारेका उनले बिस्तारै आफ्नो शाख घटाउँदै ल्याए। नागरिकले उनमा जुन विश्वास गरेका थिए र सपना देखेका थिए क्रमशः घट्दैछ। अझ कतिपय विधेयक, अपराधका घटना तथा उनले जनाएको प्रतिबद्धताले त यस्तो बनाइदियो नागरिकले उनमा विश्वास नै गर्न छाडे। उनी दोस्रोपटक पनि प्रिय नै रहिरहन सकेनन्। गर्वले बनाएको चौडा छाती आलोचनाको मालाले पुरिदियो।
समयले यस्तो बनाइदियो जनताले प्रधानमन्त्रीको काखमा विश्वासले टाउको राखेर निदाउन सकेनन्। उनी मातहतका न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनकको त कुरै छाडौं। यति नै बेला चर्चित टेलिभिजनकर्मी रवि षड्यन्त्र जस्तो देखिने घटनामा मुसिए। दूधे बालकले रिसाएको बेला आमाको काख छाडेर बाबुको काखमा सरेजसरी जनता रविको काखमा सरे। रवि जनप्रिय देखिए, सरकार सुन्नै नसकिने गरी आलोचित भयो।
सरकारले यस्तो काम गरोस्, पीडितले प्रहरीलाई खबर गरुन्। दुःख पाएका नागरिक प्रहरी वा प्रशासनसँग सुरक्षित मानून्। जसकारण भोलि कोही पनि नागरिक रवि वा रविजस्तै सञ्चारकर्मीको टेबलमा गएर न्यायको भिख माग्नु नपरोस्।
शालिकराम आत्महत्या प्रकरणपछि मिडिया दुई धारमा बाँडिए। मूलधारका मिडिया चुप रहे, केही मिडिया बोले भने अमूर्त विश्लेषण मात्र बोले। बाँकी मिडिया हाउस आफूअनुकूल विश्लेषण गर्नमा व्यस्त रहे। सडकमा देखिएको भिडको आडमा युट्युबर 'पत्रकार' भए। भ्युअर्स बटुल्न नसक्नेहरुका लागि यो प्रकरण अवसर सिद्ध भयो। शीर्षक एउटा कन्टेन्ट अर्को, अधिकांश खुराक यस्तै भेटिए। पत्रकारितामा पनि नयाँ विषय थपियो, सेन्टिमेन्ट वा आफ्नो विचार समाचारको विषय होइन। तर, कतिपय मिडियाले यसैलाई समाचार बनाए।
घटनालाई नजिकबाट स्पर्श गरेका अधिकारीहरु प्रत्येक अन्तरवार्तामा आफ्नो कुरा फेरिरहेका छन्। यसै पनि माहोल रविको पक्षमा छ। सडक तातिरहेको छ। यो बेला कुनै पनि मिडियाले भिडलाई एक थोपा पनि शीतलता दिन सकेको छैन। ताकि भिडले महसुस गरोस्, अनुसन्धान भइरहेको छ।
न्याय नपाएकी राष्ट्रपति र थुप्रै अनुसन्धान बीचमै छाडेको सरकारलाई मेरो यति मात्रै अनुरोध छ, अब काम गर्ने बेला आयो। जनताको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएका रवि सरकारलाई बाटो हुन सक्छ। काम यस्तो गरौं, भोलि पीडितले प्रहरीलाई खबर गरुन्। दुःख पाएका नागरिक प्रहरी वा प्रशासनसँग सुरक्षित मानून्। जसकारण भोलि कोही पनि नागरिक रवि वा रविजस्तै सञ्चारकर्मीको टेबलमा गएर न्यायको भिख माग्नु नपरोस्।
कोरोना अपडेट: आफन्तले अस्पताल ल्याएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भयो [भिडियो]
अमेरिकामा कोरोना कहर : संक्रमित पुगे १,११,९८०
पाँचौं कोरोना संक्रमितबारे चार दिनअघि नै बाग्लुङ अस्पताल पुगेको थियो जानकारी
कोरोना महाव्याधिबाट बच्न धैर्य गरौं उपचारकर्मीहरुलाई कोरोना भाइरस सम्बन्धी उचित तालिम दिनुपर्छ। एउटा पालमा जरो नापेको भरमा संक्रमण रोक्न सकिँदैन। शनिबार, चैत १५, २०७६
विपद्का बेला 'जीवन बचाउ कार्यक्रम' 'पत्रपत्रिकाहरु धमाधम बन्द हुँदैछन्। त्यसैले रेडियोलाई अलि सक्रिय बनाऔं। विपद्का बेला रेडियोहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तैबेला... शुक्रबार, चैत १४, २०७६
कोरोना असर : आर्थिक महासंकटदेखि 'वसुधैव कुटुम्बकम्'सम्म सरकारसँग सँधै विकल्पहरू हुन्छन्। प्रश्न जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको मिश्रण कस्तो छ भन्ने नै हो। पर्खौं, हेरौं अनि... शुक्रबार, चैत १४, २०७६
कोरोनाका कारण स्पेनकी राजकुमारी मारियाको मृत्यु आइतबार, चैत १६, २०७६
कोरोना कहर : एक लाख ३७ हजार निको भए, ६ लाख ५२ हजार संक्रमित आइतबार, चैत १६, २०७६
फ्रान्समा एकै दिन बढे ४ हजार कोरोना संक्रमित, २,३१४ जनाको मृत्यु आइतबार, चैत १६, २०७६
कोरोना अपडेट: आफन्तले अस्पताल ल्याएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भयो [भिडियो] आइतबार, चैत १६, २०७६
अमेरिकामा कोरोना कहर : संक्रमित पुगे १,११,९८० आइतबार, चैत १६, २०७६
कोरोना संक्रमित ‘हाई प्रोफाइल’ शनिबार, चैत १५, २०७६
अब जुनसुकै कम्पनीको ग्यास पनि सजिलै साट्न पाइने, आइतबारपछि ग्यास बिक्रेतासँग भरी सिलिण्डर भेटिए कारबाही हुने शनिबार, चैत १५, २०७६
सरकारका लागि होइन, आफ्नै लागि घरमै बस्नुस् : ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
संकटका बेला निजी क्षेत्रले नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व हेर्नुपर्छ : नेत्रप्रसाद सुवेदी [अन्तर्वार्ता] हेमन्त जोशी
कोरोना महाव्याधिबाट बच्न धैर्य गरौं गौरीबहादुर कार्की
विपद्का बेला 'जीवन बचाउ कार्यक्रम' ईश्वर रौनियार
कोरोना असर : आर्थिक महासंकटदेखि 'वसुधैव कुटुम्बकम्'सम्म डा स्वर्णीम वाग्ले
कोरोनाको समयमा नाफाघाटाभन्दा पनि बाँच्ने र बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ प्रकाश तिवारी
इटलीमा यस्तो अवस्था आउला भन्ने जनताले सोचेका पनि थिएनन् बिहीबार, चैत १३, २०७६
फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी एक नेपाली युवतीमा देखियो कोरोना, टेकुमा उपचार हुँदै सोमबार, चैत १०, २०७६